मनोरञ्जन विकासखबर संवाददाता
म्यूजिक खबरको ‘म्यूजिक अवार्ड’का अवसर पारेर विभिन्न विधाका व्यक्तित्वहरुलाई काठमाण्डौंमा सम्मान गरिएको छ । छैटौं संस्करणको म्यूजिक खबर म्यूजिक अवार्डको अवसरमा विभिन्न ३४ विधाका स्रष्टा एवं सिर्जनालाई अवार्ड प्रदान गरिएको छ ।
नेपाली गीतसंगीतमा आधा दशकभन्दा लामो समय खर्च गरिसक्नुभएका मकवानपुरका गायक बुद्धिमान घिसिङले यस वर्षको म्यूजिक खबर डायस्पोरा संगीत सम्मान पाएका छन् । उनले लोकदोहोरी गीत लेखन एवं गायनमा सक्रिय रहँदै आधुनिक गीततर्फ पनि निरन्तर कार्य गर्दै आएका छन् । प्रवासमा रहेर घरबासको गीतसंगीतमा लगानी गर्दै आएका घिसिङलाई यस वर्षको म्यूजिक खबर डायस्पोरा संगीत सम्मान प्रदान गरिएको हो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ गीतकार रत्नशमशेर थापालाई म्यूजिक खबर दीर्घ साधना सम्मान २०७४ प्रदान गरिन लागिएको छ । थापालाई २५ हजार ५ सय ५५ नगद राशिसहित सम्मान गरिएको छ भने सुमधुर स्वरका धनी गायक शिशिर योगी र गायिका सत्यकला राईलाई म्यूजिक खबर दशकको सम्मान २०७४ प्रदान गरिएको छ ।
त्यसैगरी पछिल्लो समयमा बाल आवाजलाई बुलन्द पार्दै अघि बढेका प्रतिभा बेगेन्द्र बुढालाई यस वर्षको म्यूजिक खबर बालप्रतिभा प्रोत्साहन सम्मान प्रदान गरिएको छ । ताम्रपत्र, ट्रफी र दोसल्ला ओढाएर उनलाई सम्मान गरिएको हो । यस वर्षको म्यूजिक खबर युवा प्रतिभा सम्मान गीतकार एवं संगीतकार पदम रोकायालाई प्रदान गरिएको छ भने ‘म्यूजिक खबर संगीत पत्रकारिता पुरस्कार’बाट संचारकर्मी डा.नवराज लम्साललाई पुरस्कृत गर्न गरिएको छ ।
विमोचन भयो थाहा कला केन्द्रको परिचय गित
पालुङ जेसिजको अध्यक्षमा अमात्य निर्वाचित
पालुङ जेसीजको वर्ष २०१८ का लागि अध्यक्षमा विजयश्याम अमात्य निर्वाचित भएकाछन् । अमात्यसर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । २ पौषमा भएको साधारसभा पश्चात् ३...
एमालेसँगको एकतामा जाँदैनौ‌ंः रायमाझी
चुनावको परिणामलाई कसरी लिनुभएको छ ? हरेक संसदीय निर्वाचनमा सपनाहरुको व्यापार हुन्छ । विकासको बकम्फुसे नाराहरु तेर्साईन्छ । र, त्यसैको आधारमा...
प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष को हुन्छ ? पढ्नुहोस् ओली र प्रचण्डको जवाफ
पार्टी एकता पहिले कि सरकार गठन ? प्रधानमन्त्री केपी ओली बनेपछि एकीकृत पार्टीको अध्यक्षचाहिँ को ? प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष आलोपालो गर्ने हो कि ?...
सकियो पालुङ जेसिजको १७ औं वार्षिक साधारण सभा, अध्यक्षमा निर्वाचन नै हुने संकेत
मकवानपुरको थाहानगरमा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील पालुङ जेसिजको १७ आंै वर्षिक साधारण सभा २ पौषमा सम्पन्न भएको छ । थाहानगरका उपप्रमुख खड्ग गोपालीको...
मकवानपुरमा यात्रु ठग्ने चालक सहित सवारी साधन प्रहरी नियन्त्रणमा
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले सुमोमा यात्रा गर्ने यात्रु ठग्ने चालक तथा टिकट काउन्टरमा रहने कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ । हेटौँडाबाट काठमाण्डौँ...
मकवानपुरमा समानुपातिकमा को अगाडि ? (हेर्नुहोस् मत सहित)
२१ मंसिरमासम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन अन्र्तगतको सामानुपातिक सांसदको लागि मतगणना सुरु भएको छ । यस्तो छ हालसम्मको मतपरिणाम: नेकपा...
पहिलो पल्ट जसले रुपचन्द्र विष्ट हराए अहिले काँग्रेस नेतृलाई
मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट नेकपा एमालेका बिरोध खतिवडा विजयी भएका छन् । उनले कांग्रेसकी नेतृ महालक्ष्मी डिना उपाध्यायलाई ११ हजार ९६३ मतले हराउँदै...
बानिँयाको पछिपछि स्याङ्तान, २४ हजार ८ सय ९५ मत गनियो
प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गतको प्रदेशसभा २ को ताजा मतपरिणाम अनुसार लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार ईन्द्रबहादुर बानिँयाले १२ हजार २६ मत...
मकवानपुरमा एउटी महिला लडाकूको ह्याट्रिक
१६ वर्षको उमेरमा सशस्त्र युद्वमा होमिएकी महिला लडाकु कुमारी मोक्तानले तेस्रो पटक संसदको यात्रा तय गरेकी छिन् ।वाम गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी...